မီးရထားလမ်းကြောင်း | RayHaber | raillynews
Covid-19 Salgını sonrası TCDD hızlı ve bölgesel trenlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. 28 Mayıs itibari ile hızlı tren seferlerinin başlayacağı açıklandı (Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre 20 Mayıs tarihinde başlaması gerekiyordu) . Ancak Adapazarı [ပို ... ]
YHT လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုမေလ ၂၈ ရက်တွင်စတင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရမီးရထားလမ်း (TCDD) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး A... ဘဝ (HPP) ရှိအိမ်တွင်းအကြိုက်ဆုံးများကိုနံပါတ်နှင့်အတူ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT) ကလက်မှတ်များကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဗီဒီယိုသင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
လေကြောင်းအတွက်အရှုံး $ 314 ဘီလီယံ
Izmir မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer သည်ညမထွက်ရအမိန့်မတိုင်မီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများအားစစ်ဆေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်, သူတို့ Kordon အတွက်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Adil Karaismailoğluသည် Lapseki ရှိသတင်းမီဒီယာများအားပြောကြားရာတွင်နောက်ဆုံးအနေဖြင့် blockanakkale Bosphorus တံတား၏သံမဏိတာဝါတိုင်များတွင်နေရာချခြင်းအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အသစ်သောကာလ၏ဝန်ကြီးဌာန [ပို ... ]
TCDD Afyonkarahisar အမှတ် (၇) ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှထုတ်လုပ်သော ၀ န်ထမ်းသည်ရထားလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ လမ်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၏လုပ်ငန်းခွင်တွင်နေထိုင်ရန်နှင့်အနားယူရန်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်။ [ပို ... ]
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်လိုင်းအောက်ရှိမီးရထားလမ်းဥမင်ကိုဖွင့်သောအခါဂရိတ်ဗြိတိန်ရေခဲပြင်ခေတ် မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်ဥရောပပြည်မနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလီယံကုန်ကျတယ်။ [ပို ... ]
တရုတ်နှင့်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်အကြားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရထားလမ်းသစ်ပေါ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ Jinan Nan ဘူတာ၊ ကာဇက်စတန်နယ်စပ်ဒေသ Horgos၊ [ပို ... ]
မေလ ၁၀ ရက်၊ Utah ရှိ Promontory မြေပြင်အခမ်းအနားတွင် sledgehammer သည်ရွှေမှုတ်သည့်အခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်တကယ်ပင်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ခုနှစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း [ပို ... ]
Baykar, Biosys, Arçelikနှင့် Aselsan တို့ကစက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန၏ညှိနှိုင်းမှုဖြင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ စမ်းသပ်မှုများကိုအောင်မြင်စွာဖြေဆိုပြီးနောက်ဆရာ ၀ န်များထံမှအပြည့်အ ၀ ရရှိသည်။ [ပို ... ]
ယူအက်စ်ဘိုးရင်းကုမ္ပဏီမှ ဦး ဆောင်သောသြစတြေးလျစက်ရုံလုပ်ငန်းသည်ပထမ ဦး ဆုံး Loyal Wingman မောင်းသူမဲ့တိုက်လေယာဉ် (UCAV) ရှေ့ပြေးပုံစံကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ပြီးAirစတြေးလျလေတပ်သို့တင်ပြခဲ့သည်။ ဘိုးရင်းပါ [ပို ... ]
"Covid-19 သန့်ရှင်းမှု၊ ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းညွှန်" ကို Covid-19 နှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းများတိုက်ဖျက်ရာတွင်လမ်းညွှန်မည့်တူရကီစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာဌာန (TSE) မှကျွမ်းကျင်သူများကပြင်ဆင်သည်။ သန့်ရှင်းရေးနှင့်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် Covid-19 ကိုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်စက်မှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်လမ်းညွှန်သည်ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန် [ပို ... ]
အချိန်ကြာမြင့်စွာထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားသောအသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက်သိပ္ပံကော်မတီ၏ထောက်ခံချက်နှင့်သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğan၏ညွှန်ကြားချက်များအရမေလ ၂၁ ရက်ကြာသပတေးနေ့မှအနည်းဆုံးတစ်လမပြန်နိုင်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။ [ပို ... ]